पत्रकार कुटपिटको घटनामा अनुसन्धान शुरू - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
पत्रकार कुटपिटको घटनामा अनुसन्धान शुरू
२०७५-०७-२९ बिचार / प्रतिक्रिया
छानबिन भइरहेको विषयमा बोल्न मिल्दैन– पत्रकार राई
न्यूयोर्क । बिआरटी नेपाल डटकमका प्रधानसम्पादक लोकमणि राई कुटिएको विषयमा प्रहरीको क्वीन्सको एल्मस्र्टस्थित ११० प्रिसिन्ट डिटेक्टिव स्क्वाडले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाले नोभेम्बर ८ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका पत्रकार राईमाथि नेपालको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका सहयोगी पारुहाङ राईका सोल्टी उमेश राईले कुटपिट गरेका थिए । घटनालगत्तै एल्मस्र्ट अस्पतालमा भएको भेटमा पत्रकार राईले भनेका थिए– ‘तँ जे पायो त्यही लेख्ने ? कलम छ भन्दैमा जेसुकै लेख्न पाइन्छ ? भन्दै मुक्का हान्यो ।’ कार्यक्रम हलभित्र बसिरहेका बेला राति करिब १२ बजे किरात राई सोसाइटीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर प्रताप राईले ‘एकैछिन चुरोट खान जाउँ न’ भन्दै बाहिर ल्याएको र बसेर गफ गरिरहेका बेला उमेश आएर एक्कासि मुक्का हानेको राईले बताएका थिए । अमेरिका जस्तो मुलुकमा कसैले मुक्का हान्छ होला भन्ने परिकल्पनासम्म नगरेको उनले बताएका थिए । घटनापछि राईले फोन गरेर प्रहरी बोलाएका थिए भने प्रहरीले नै उनलाई अस्पताल पु¥याएको थियो ।
घटनाको दुई दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री शेरधन राई न्यूयोर्क आइपुगेका थिए । पत्रकार राईले उपचार गर्न थाइल्याण्ड पुगेका मुख्यमन्त्री सरकारलाई जानकारी नै नदिई अमेरिका आइपुगेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई न्यूयोर्कमा कालो झण्डा देखाउने समूहले नै मुख्यमन्त्री राईको स्वागत कार्यक्रम राखेको विषयलाई लिएर समाचार लेखेका थिए । समाचार लेखेकै आधारमा आफूमाथि कुटपिट भएको पत्रकार राईले दाबी गरेका छन् ।
बैंककमा घाँटीको उपचार गराउन गएका मुख्यमन्त्री राई सरकारको स्वीकृतिबिना अमेरिका आइपुगेका थिए । बैंककमा भएको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नभएको बताएपछि व्यक्तिगत भ्रमणका लागि भन्दै उनी न्यूयोर्क आइपुगेका थिए । थाइल्याण्ड हुँदै अमेरिका आइपुगेका मुख्यमन्त्री राईको स्वागत गर्दै प्रवासी नेपाली मञ्च र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)ले कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई फिप्नाकै नेतृत्वमा कालो झण्डा देखाइएको थियो । यसै विषयलाई लिएर पत्रकार राईले ‘पिएमलाई कालो झण्डा, सिएमलाई सम्मान’ शीर्षकमा समाचार लेखेका थिए । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना नै मुख्यमन्त्री राई अमेरिका भ्रमणमा आएको विषयमा ‘प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अमेरिकामा’ शीर्षकमा समाचार लेखेका थिए ।
घटनाको पछिल्लो विवरणबारे बुझ्न खोज्दा पत्रकार राईले केही पनि बोल्न मानेनन् । ‘यस विषयमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनमा रहेको मुद्दामा मैले केही बोल्न मिल्दैन । बोल्दा छानबिन प्रभावित पार्न खोजिएको ठहर्छ । छानबिन सकिएपछि के भएको हो भन्ने विषयमा मैले बोल्नै पर्छ,’ उनले भने ।
राईको रातभर अस्पतालमा उपचार भएको थियो । सिटीस्क्यान, भिडियो एक्स रे, एमआरआई सबै चेकजाँच गरेपछि भोलिपल्ट बिहान मात्रै राईको डिस्चार्ज भएको थियो । अस्पतालको रिपोर्टमा राईको अनुहारमा आक्रमण भएको र बायाँ गाला सुनिएको पाइएको छ । अन्य शरीरका भाग र स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य छ ।
राईलाई भेट्न अस्पताल आइपुगेका बोर्ड अफ डाइरेक्टर प्रताप राईले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने– ‘जे भयो अति नराम्रो दुखद् घटना भयो । जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो भैसक्यो अब एकअर्काबीच मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । घरभित्रको झगडालाई बाहिर ल्याउनुभन्दा घरभित्रै मिलाउनु राम्रो हुन्छ ।’
घटनालाई सार्वजनिक गर्दा, प्रहरीसम्म पु¥याउँदा पीडकको जीवनमा अप्ठेरो पर्ने भन्दै राईलाई अस्पतालमा भेट्न पुगेका सबैले घटना मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अमेरिकामा रहेका पत्रकार राईमाथि कुटपिटको घटनाको चौतर्फी भत्र्सना भएको छ । विभिन्न संघसंस्थाले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । राईमाथि भएको भौतिक हमलाको नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)ले विज्ञप्ती जारी गर्दै घोर भत्र्सना गरेको छ । ‘अमेरिका जस्तो उदाहरणीय प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार कुटिनु निकृष्ट अराजकता हो । यस्ता निन्दनीय हर्कतको घोर भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गर्दछ,’ नेजाको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पत्रकार संघ (इन्जा)ले पनि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।